ရှမ်းပြည်ကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတသွားလောက်အောင် ရှမ်းအရသာစစ်စစ်တွေကို ခံစားရရှိစေနိုင်ဖို့………. – FoodiesNavi
ရှမ်းပြည်ကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတသွားလောက်အောင် ရှမ်းအရသာစစ်စစ်တွေကို ခံစားရရှိစေနိုင်ဖို့……….
By yin sandi On February 23, 2018 0
ရှမ်းအငွေ့အသက်တွေကိုလွှမ်းခြုံနေတဲ့ ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်လေးမှာ ရှမ်းပြည်အလွမ်းလေးတွေဖြေရင်း ရှမ်းရိုးရာအစားအစာလေးတွေကို သုံးဆောင်ချင်သူများအတွက် Foodies Navi ကနေ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာအစုံအလင်ကို တစ်နေရာတည်းမှာ သုံးဆောင်နိုင်မယ့် လွိုင်ဆမ်ဆစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကတော့ အမှတ်(၃၁) ၊ ရှင်စောပုလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
လွိုင်ဆမ်ဆစ်မှာတော့ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေကို တစ်ပွဲချင်းမှာယူသုံးဆောင်နိုင်သလို အဖွဲ့လိုက်တပျော်တပါး သုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် set menu တွေကိုလည်းမှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တာတွေကတော့ ရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ ဝက်သားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို အများကြီးထည့်ထားပြီး အရသာထူးခြားလွန်းလှတဲ့ နီနီရဲရဲဝက်သားချဉ် ၊ မှိုများများလေးနဲ့ ရှူးရှူးရှဲရှဲအရသာတွေ ခံစားရစေမယ့် မှိုချဉ်စပ် ၊ ရန်ကုန်မှာရခဲတဲ့ တစ်ခါစားပြီးတစ်သက်စွဲသွားစေမယ့် ဆန်တို့ဟူး ၊ လွိုင်ဆမ်ဆစ်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ နူးညံ့တဲ့မြီးရှည်ခေါက်ဆွဲနဲ့ တို့ဟူးဖတ်လေးတွေပေါင်းစပ်ထားပြီး ကျောက်မဲဒေသကအရသာအတိုင်း ခံစားရစေမယ့် ကျောက်မဲမြီးရှည် ၊ တစ်ရက်ကြိုတင်ပြီးပေါင်းထားတဲ့ ဝက်နံရိုးတွေကို နူးညံ့တဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲစီးစီးလေးနဲ့အတူ အရသာစိမ့်စိမ့်လေးခံစားရစေမယ့်ဝက်နံရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲ၊ရှမ်းဆန်စေးစေးလေးနဲ့နူးနေအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ငါးရံ့လေးကိုခရမ်းချဉ်သီးခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်လေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ငါးထမင်းနယ်၊ကောက်ညင်းအဖြူပေါင်း၊ငချိတ်ပေါင်းနဲ့ဆီထမင်းအစရှိတဲ့ကောက်ညှင်းပေါင်းသုံးမျိုးကိုတွဲဖက်ပြီးဝက်သားကင်၊နမ့်ဖစ်၊ချဉ်စော်ကားသီးထောင်း၊အကြော်စုံတို့နဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာသုံးဆောင်နိုင်မယ့်ကောက်ညှင်းသုံးမျိုးပေါင်းစတဲ့ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေကိုအရသာရှိရှိသုံးစွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွိုင်ဆမ်ဆစ်ရဲ့စားပွဲတွေမှာ ဟင်းချိုမှုန့်လုံးဝမသုံးထားတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကလည်း ရှမ်းပြည်ကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတသွားလောက်အောင် ရှမ်းအရသာစစ်စစ်တွေကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၇)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီခွဲအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/loisamsip
In Restaurant Guides Tagged Shan foods Leaveacomment
ပူပူနွေးနွေး အရသာရှိရှိနဲ့ စျေးနှုန်းချိုသာစွာသုံးဆောင်နိုင်မယ့် Mr.Bite……………
ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့အရသာအတိုင်း ကွက်တိဖြစ်စေမယ့် ဝက်သားဒုတ်ထိုးပြုလုပ်နည်း